China Multi-axial Olu nke Humerus ckingkpọchi efere ụlọ ọrụ na-emepụta | Shuangyang
Otutu ugwo olu nke nkpuru ahihia nke ikpuchi ogwu
bụ adreesị dị mgbagwoju anya nke proerimal humerus
2. Titanium na uzu nhazi teknụzụ;
Otutu uzo a na-echechi nkpuchi na mgbapu mgbawa, osteotomies na nonunions nke proerimal humerus, karịsịa maka ndị ọrịa nwere ọkpụkpụ osteopenic.
Ejiri maka Φ4.0 mkpọchi mkpọchi, Φ3.5 cortex ịghasa na Φ4.0 cancellous ịghasa, ekwekọghị na 4.0 usoro orthopedic ngwá set
Multi-axial Olu nke Humerus ckingkpọchi efere nkọwapụta
N'olu nke Humerus mkpọchi efere
Olu nke humerus kpochidoro efere bụ adreesị mgbagwoju fractures nke proximal humerus.
Olu nke efere mkpọchi ọgwụ na-egosi maka mgbawa na mgbaji mgbaji, osteotomies na nonunions nke proerimal humerus, karịsịa maka ndị ọrịa nwere ọkpụkpụ osteopenic.
Ejiri maka Φ4.0 mkpọchi mkpọchi, Φ3.5 cortex ịghasa na Φ4.0 cancellous ịghasa, ekwekọghị na 4.0 usoro ịwa ahụ ngwá set.
N'olu Humerus ckingkpọchi efere nkọwapụta
A haziri efere titanium a rụpụtara site na ụlọ ọrụ anyị dị ka ụkpụrụ nke AO imezi, ụkpụrụ ISO5836 na ụkpụrụ mba ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị mkpa. A na-eji ihe nkedo nke titanium ọkpụkpụ mee ihe. A haziri efere titanium ziri ezi na anatomic titanium maka isi dịka usoro anatomical nke ọkpụkpụ.
Titanium kpochidoro efere ọkpụkpụ dị na titanium, Orthopedics Locking Pets, nke a makwaara dị ka Mkpọchi Mkpakọ Mbadamba, bụ ngwakọta nke teknụzụ mkpọchi mkpọchi na usoro ihe eji eme ihe. A na-emepụta efere Orthopedic mkpọchi na nha dịgasị iche. A na-etinye efere yana kposara na ha. Usoro mkpọchi mkpọchi na-eme ka ihe nkedo efere sie ike na ọdịda, n'ihi na nkedo anaghị agbapụta, ọ naghị atọpụ ya.
Mkpọchi efere ọkpụkpụ na-emepụta site titanium unalloyed nke kwekọrọ na ISO5832-2 ma ọ bụ GB / T 13810-2007. Ya mere, ha na biocompatibility bụ mma.MRI na CT nwere ike rụrụ mgbe ọrụ. Enyere ngwa ọrụ nkwado pụrụ iche, na-eme ka ngwaahịa a dị mfe iji, nchekwa ma nwee ntụkwasị obi. Ngwakọta oghere ndị nwere oghere ndị nwere oghere na mkpakọ oghere na efere mkpọchi nwere ike iji maka mkpọchi na mkpakọ, nke dị mma maka dọkịta ịhọrọ. Mmetụta dị ntakịrị n'etiti efere ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na-ebelata mbibi nke ọkọnọ periosteal.
A na-enye efere ọkpụkpụ Titanium dị ka etinyere orthopedic maka ụlọ ọrụ ahụike, ma ezubere ịgwọ saịtị mgbaji nke ndị ọrịa n'okpuru nhụjuanya izugbe site n'aka ndị dọkịta a zụrụ azụ ma ọ bụ ndị nwere ahụmahụ na ime ụlọ na-agbaso ihe ndị metụtara gburugburu.
A ga-enyocha ihe ndozi dị n'ime ya nke ọma tupu eji ya eme ihe, ma ghara iji ya mee ihe ozugbo na nrụrụ na ọkọ. Nyochaa ụdị mgbaji ọkpụkpụ dịka ihe nkiri X-ray nke ebe mgbawa ahụ, chepụta usoro ịwa ahụ, ma họrọ ụdị kwesịrị ekwesị na nkọwapụta nke titanium ọkpụkpụ efere. A na-ewepụ efere ọkpụkpụ Titanium n'ime afọ 2 mgbe mgbaji ọkpụkpụ.
Nke gara aga: Clavicle Nko Na-ekpochi efere
Osote: Mkpọchi Mkpọchi Yume Humeral Y
Otu ụzọ n'ụzọ atọ ubkpọchi efere
2.0mm Titanium kpochidoro Aka Aka System
Distal Lateral radius kpochidoro efere
3.0mm Mkpọchi efere
Multi-axial Medial Tibia Plateau ckingkpọchi efere
Cannulated Headless Mkpakọ ịghasa